Arsenal oo go’aansatay inay iibiso xiddigaha Aubameyang iyo Lacazette si ay ula soo saxiixato…. – Gool FM
Arsenal oo go’aansatay inay iibiso xiddigaha Aubameyang iyo Lacazette si ay ula soo saxiixato….
Dajiye December 26, 2019
(London) 26 Dis 2019. Arsenal ayaa wajaheysa xaalad hubanti la’aan ah ee la xiriirta qaar ka mid ah ciyaartoydeeda, sida labada xiddig ee Pierre-Emerick Aubameyang iyo Alexandre Lacazette suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee soo aadan.
Warbaahinta Faransiiska ah ayaa shaaca ka qaaday maanta oo Khamiis ah in tababare Mikel Arteta uu u aqoonsaday Moussa Dembélé inuu noqon karo badelka xiddigaha Aubameyang iyo Lacazette xagaaga soo socdan hadii ay dhacdo inay ka takhalusaan labadan ciyaaryahan.
Xiddigaha Aubameyang iyo Lacazette ayaa lala xiriirinayay inay ka tagayaan kooxda Gunners, tan iyo markii shaqada laga ceyriyay tababaraha reer Spain ee Unai Emery.
Kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ayaa seegtay inay ka qeyb gasho tartanka UEFA Champions League, sababa la xiriira inaysan heli boosaska afarta sare ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, waxayna taasi dhibaato gelisay ciyaartoy waa weyn oo kooxda ka tirsan.
Wargeyska “Le10Sport” ee dalka Faransiiska ayaa soo wariyay in Arsenal ay dejisay qorshe deg-deg ah oo ay ku xallineyso bixitaanka xiddigaha Aubameyang iyo Lacazette, si Moussa Dembélé uu ugu sareeyo liiska xiddigaha ay dooneyso inay la saxiixdaan, iyagoo isku diyaarinaya inay meelmariyaan dhammaan codsiyada kooxda Lyon.
Dhinaca kale wargeyska “Daily Star” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in maamulka kooxda Arsenal aysan diidi doonin inay fariistaan miiska wada hadalka si ay u iibinayaan xiddigaha Aubameyang iyo Lacazette xagaagan, laakiin waa haddii ay dhacdo inay ku helaan mid kasta oo ka mid ah labadan xiddig 100 milyan ginni.
RASMI: Xiddigii hore ee Kooxaha Elman iyo Jeenyo C/llaahi Muxudiin oo dib ugu laabtay Kooxdiisii hore
Shaxdii ugu wanaagsanayd kubadda cagta 10-kii sano ee lasoo dhaafay oo la soo saaray... (Imise xiddig ayey ku leedahay Kooxdaada?)